‘कलाकार गहना होइनन्, गहन हुन्’- नरेन्द्र प्यासी (वरिष्ठ गायक तथा संगितकार)
‘कलाकार गहना होइनन्, गहन हुन्’- नरेन्द्र प्यासी (वरिष्ठ गायक तथा संगितकार)	By नवीन सन्देश on	११ आश्विन २०७३, मंगलवार १०:४६
नेपाली सांगितीक क्षेत्र, जहाँ सयौं व्यक्तित्वहरु उदाए, अस्ताए र अझै यो क्रम जारी नै छ अहिले पनि । त्यहि क्षेत्र जहाँबाट उनले आफ्नो पहिचान बनाए, दुनियाँलाई चिनाए र आफू चिनिए सबै सामू । सानै उमेर देखि गितसंगितमा लागेका उनी हुन् , चर्चित गायक, संगितकार एवं चित्रकार नरेन्द्र प्यासी । राजधानीको खिचापोखरीमा वि.सं. २०२२ सालमा जन्मिएका उनी ०३० सालमै रेडियो नेपालबाट स्वरपरिक्षा पास गरेपछि विधीवत रुपमा साँगितीक फाँटमा प्रवेश गरेका हुन् । यो समय सम्ममा उनले करिव ३ सय जति गित गाएका छन् । पछिल्लो पटक वास्ना एल्बमले उनलाई निकै चर्चामा पु¥यायो ।
केहि समय अघि मात्र आफ्नो सांगितीक नाकको डाँडी जोगाउनका लागि वाणि एल्बम निकालेका प्यासी विगत ४ वर्ष देखि अमेरिकामा छन् । यसपटक उनीसँग नवीन सन्देशका लागि संवाददाता ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपीले अनलाइन मार्फत कलाक्षेत्र र अन्य विषयमा रमाइलो कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश:
तपाईंको परिचय दिनुस न । नरेन्द्र प्यासि, गायक, संगितकार एवं चित्रकार । भुषाल परिवारमा जन्मिएँ । प्यासी उपनामले परिचित छु ।
कहिले देखि गित गाउन थाल्नुभयो ? २०३० सालमा रेडियो नेपालबाट स्वरपरिक्षा पास गरेपछि मैले गित गाउन थालेको हुँ ।
पहिलो गित कुन थियो ?
“बिना बादल असिनापानी, फेरि माया लाउली बैमानी ” बोलको गित मैले पहिलो पटक गाएको गित हो ।
गित गाउने प्रेरणा कसले दियो ? अहिले सम्म कति गितहरु गाउनु भएको छ ?
बुबाको प्रेरणाले म गित गाउँन थालेको हुँ । अहिले सम्म ३ सय जति गित गाएँ होला कि ..! अहिले प्रविधीको विकास भएको छ ।
पहिले र अहिलेको गित गाउने तरिकामा कस्तो फरक पाउनु भएको छ ? पहिला त निकै समस्या थियो । अहिले जस्तो सजिलो थिएन । त्यतिबेला लाइभ गाउँदा सम्पूर्ण बाजा भर्ने र गाउने एकैचोटिमा गर्नुपथ्र्यो । अहिले म्युजिक ट्रयाक तयार भइसकेपछि गाइन्छ । यो सबै आधुनिक प्रविधीको कारण हो । विगत ४ वर्ष देखि देश बाहिर हुनुहुन्छ । अरु पनि थुप्रै कलाकार विदेश पलायन भएका छन् ।
पहिलो पुस्ताका कलाकार र गितकारहरु यसरी विदेशिनु पर्ने बाध्यता के आइप¥यो ?
सबै जना कलाकार बाहिर गयो मात्र भन्छन् तर अहिले सम्म किन ऊ बाहिर गयो भनेर कसैले पनि चासो दिएका छैनन् । अहिले बिदेशिनु सबैका लागि बाध्यता भइसकेको छ । यो कसैको पनि रहर होइन । त्यसैले रहरले भन्दा पनि करले बिदेशिन बाध्य पारेको हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । राष्ट्रका गहना मानिएका सर्जकहरु यसरी विदेशिदा देशलाई ठूलो घाटा छ ।
स्वदेशमा केहि विकल्प थिएनन् र ? तपाईंले कलाकारहरुलाई गहना भन्नुभयो तर मलाई गहना हुन् जस्तो लाग्दैन । गहना त जहाँ पनि किन्न पाइन्छ । बेच्न पनि पाइन्छ । तर कलाकारलाई कसैले पनि किनबेच गर्न सक्दैन । उनीहरु गहना होइनन् गहन हुन् । आवश्यक पर्दा लगाउने र आवश्यक नपर्दा फुकालेर थन्क्याउन मिल्ने गहना जस्तो कलाकार हुनै सक्दैन । र कलाकार विदेशिनु भनेको देशको लागि घाटा हो । महत्व बुझेर उनीहरुलाई स्वदेशमै रहने वातावरण बनाएको भए रोजगारीको विकल्पमा विदेशिनुलाई कसैले पनि संकल्प बनाउँदैनथ्यो होला नि । कुनै पनि वस्तु हराउनु भन्दा त्यो सामानको हिफाजत गर्न सक्ने हो भने हराउने नै थिएन भन्ने बुझ्नु पर्छ । प्रसङ्ग बदलौं , तपाईंको अनुभवमा गित संगित के हो ? गितसंगित भनेको देखिने र छुने वस्तु होइन । यो त सुनेर अनुभूती गर्ने चिज हो जस्तो लाग्छ मलाई त । हिजोआज अरुका गितहरु चोर्ने विकृति वढेको छ ।
त्यस्ता मान्छेलाई के भन्नुहुन्छ ? नक्कल गर्नु पर्छ तर अक्कल पु¥याएर गरेको नक्कल मात्र राम्रो हुन्छ । कसैले सिधै अरुको सिर्जना चोरेका छन् । यो गलत हो । संगितका १२ स्वरमा कतै न कतै त छुन्छ तर त्यसबाट बचेर फरकधारमा पनि त ढाल्न सकिन्छ नि । अरुको रचना चोर्नेलाई संगितको ज्ञान नभएको भन्छु म त । यदि ऊ सँग प्रशस्त ज्ञान थियो भने अरुको रचना चोर्नेतिर ध्यान नै दिंदैनथ्यो नि ।
नेपालको समसामयिक राजनितीक घटनाक्रम प्रति तपाईंको धारणा के छ ? मलाई राजनितीमा खासै रुचि छैन र राख्दिन पनि । बरु राजनितीमा लाग्नेहरु चाहिं गितसंगितमा अभिरुची राख्छन् । तपाईं आफैं भन्नुस् न राजनिती र संगितमा कति भिन्नता रहेछ भनेर ।
देशको अस्थिर राजनितीले कलाक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? संगित श्रृजना भनेको शान्त र स्थिर समयमा मात्र संभव छ । अस्थिरताले कुनै पनि क्षेत्रमा राम्रो गर्दैन । राजनितीक अस्थिरताले संगित मात्र होइन , सबैक्षेत्रलाई लथालिंग पारिदिन्छ । यस्तो वातावरणमा कसैले राम्रो गर्नै सक्दैन ।
अबको पुस्ताले कला र गितसंगित क्षेत्र रोजेर यसमा आफ्नो भविष्य बनाउँछु भन्यो भने त्यो संभव छ कि छैन ? पहिलेको तुलनामा अहिले संगित र कला क्षेत्रको विकास त भएको छ । तर अझै पनि त्यस क्षेत्रमा लागेकाहरुको आर्थिक विकास जति हुनु पर्ने थियो, त्यति हुन सकेको छैन । अरु देशमा व्यवसायिक कलाकारिताको विकास भइसकेको छ । तर नेपालमा भने यसमै लागेर बाँच्न सक्ने अवस्था अझै बनेको छैन । देशमा विगत केहिवर्ष देखि प्राकृतिक विपतीहरु थपिएका छन् । गतवर्ष विनासकारी भूकम्प गयो ।
अब यसलाई पूर्नजिवन दिन कसले के गर्नु पर्ला ? भत्किएको नेपाल पूर्ननिर्माणका लागि जनता अग्रसर हुनुपर्छ । विशेषगरि राजनितीक दलका नेताहरुको भूमिका पनि उल्लेखनिय रहनु आवश्यक छ । जसका हातमा देश संचालनको ताल्चा र साँचो छ । आफू गायक हुनुहुन्छ ।
आफैंलाई मन पर्ने गायक र गीत चाहिं कुन हो नि ? आफ्ना छोराछोरी सबैलाई सबै मन पर्छ भने जस्तै मेरा गितसंगित पनि जति छन् ती सबैलाई म उत्तिकै माया गर्छु । मलाई मन पर्ने गायक दीप श्रेष्ठ हुन् ।
एउटा गायकले साँच्चै नै गायक बन्न के के गर्नु पर्ने रहेछ ? धेरै कुराहरुमा विचार पु¥याउनु पर्छ । चरित्र, अनुशासन, व्यवहार साथै भगवानको आर्शिवाद र गुरुको शिक्षाले मात्र अगाडि वढ्न सकिन्छ । साथै लगनशिलता र मिहिनेत पनि चाहिन्छ ।
गितसंगित क्षेत्रका अतिरिक्त तपाईंको रुचि के हो ?
यसका अतिरिक्त चित्रकला मेरो अर्को मन पर्ने विषय हो । म चित्र पनि बनाउँछु ।
व्यस्तताका बाबजुद पनि समय दिनु भयो । समय र संवादका लागि धन्यवाद । मलाई माया गरेर नेपाल देखि सम्झनुभयो । मेरा कुराहरु पाठक, दर्शक र श्रोता माझ पु¥याउन सहयोग गर्नुहुने तपाईं र तपाईंको मिडिया नवीन सन्देश डटकमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
तपाइँकॊ प्रतिक्रिया : Related Posts २७ भाद्र २०७३, सोमबार १५:४८ 0	मजा भने हाँस्यमैं आउँछ
२१ भाद्र २०७३, मंगलवार १३:४९ 0	नेपालका कुनै पनि गा.वि.स., वडा तथा नगरपालिकामा सेवा प्रदान गर्न सक्षम छौं
२१ भाद्र २०७३, मंगलवार ०९:४४ 0	“कमटेकमा ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेटलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं”– बिश्वराम बलामी (महासचिव, क्यान महासंघ)